कुलमानको नाम लिएर सांसद महतले यतिसम्म भनेपछि संसदमा मच्चियो खैलाबैला — Imandarmedia.com
कुलमानको नाम लिएर सांसद महतले यतिसम्म भनेपछि संसदमा मच्चियो खैलाबैला
काठमाडौँ। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले वर्तमान सरकारले कुलमान मात्रै देखेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले कुलमान घिसिङ बाहेक अर्को मान्छे नभएको जस्तो गरेको भन्दै कुलमान बुढो भएपछि सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद महतले डुबेका नेपाल एयरलाइन्स लगायतका संस्थानतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पुरानो सरकारले हनुमान मात्रै देख्यो। नेपाल सरकारले कुलमान मात्रै देख्यो। एउटा सरकारले हनुमान बाहेक अरु नदेख्ने, एउटा सरकारले कुलमान बाहेक अरु नदेख्ने। यसको मतलव मैले कुलमानलाई हनुमानसँग दाँजेको होइन, हनुमानले त हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धुँजाधुँजा पारिहाले, उनले भने।
उनले अगाडि भने, ‘पाँच महिनाको तलव एकैपटक हाजिर नभएका मान्छेलाई कर्मचारीले खुवाइरहेका छन्। कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदामै ल्याएका छन्। तर कुलमान बाहेक अर्को मान्छे छैन त? कुलमान बुढो भएपछि के गर्छ त यो सरकारले? कुलमान बुढो भएपछि अर्को कुलमान कसरी खोज्छ त? विद्युत प्राधिकरण मात्रै छ? कुलमान मात्रै छ? नेपाल एयरलाइन्स छैन? अरु संस्थानहरु डुबेका छैनन्? खाली किन कुलमान मात्रै?
यसै गरि, मुख्यमन्त्री कुर्सीमा ‘निलम्बित शिक्षक’
पेशाले शिक्षक। तर मष्तिस्कमा भरिएको राजनीतिक ‘चेत’ रत्तिभर बिचलित थिएन। मसालका कट्टर कार्यकर्ता। विद्यालयमा पढाउने स्थायी शिक्षक रोल्पाका कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ राजनीतिक गतिविधिका पनि उस्तै ‘मास्टर’ थिए।
मसाल राजनीति विस्तारका लागि अध्यापन बाहेकको समय उनी गाउँगाउँमा राजनीतिक कक्षा सञ्चालन गर्थे। कम्युनिष्टको आदर्श र सिद्धान्त पढाउन गाउँगाउँ पुग्ने केसीका लागि राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा ‘मसाल’ लाई पास गराउनु राजनीतिक कार्यभार थियो। उनी शिक्षण पेशासंगै मसालको राजनीतिमा थिए।
अध्यापन पछिको राजनीतिक कर्मकै कारण उनको अध्यापन यात्रामा बिराम लाग्यो। २०५० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई ‘कालो झण्डा’ देखाउने ‘शाहस’ को दुष्परिणाम २०४८ देखिका शिक्षक सोनाम जागिरबाट हात धुन बाध्य भए।
त्यो बेला कोइराला रोल्पा पुगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएकै कारण राज्यले उनलाई बिभिन्न मुद्दा लगायो अनि शिक्षण पेशाबाट बर्खास्त गरिदियो। शिक्षण पेशाबाट निलम्बन भएपछि केसीका लागि राजनीतिक निर्बिकल्प यात्रा बन्यो। प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएकै कारण शिक्षण पेशाबाट हात धुनु परेको घटनाको ईखले पनि उनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने साहस बढ्नु स्वाभाविकै थियो।
शिक्षण पेशाबाट हात धोएका सोनाम २०५२ को जनयुद्धमा सामेल हुने निर्णयमा पुगे। माओवादीको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला सदस्य चुनिएपछि औपचारिक रुपमै ‘प्रचण्डपथ’ को मार्गमा सोनामको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो।
यति मात्रै हैन, द्वन्द्वको कार्यदिशा बोकेको माओवादीका कार्यकर्ता बनेका उनी रोल्पाको होलेरी आक्रमणमा राज्यविरुद्ध भिडे। राज्यविरुद्ध होलेरीमा पहिलो परेड खेलेका उनै सोनाम मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान बनेका छन्। बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चनिएका छन्।
जिल्ला सदस्य बनेर माओवादीको भूमिगत राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका सोनाम माओवाद सिद्धान्तका कुशल ब्याख्याकारका रुपमा समेत चिनिए। ०५५ मा दाङ, सल्यान, प्यूठान जिल्लाको माओवादी सेक्रेटरी बनेका सोनाम ०५६ मा भेरी कर्णाली क्षेत्रका शैन्य कमाण्डर चुनिए। जिल्ला हुँदै बिभिन्न क्षेत्रमा ‘माओवादको कमाण्ड’ सम्हालेका सोनाम ०५८ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
माओवादी राजनीतिमा बौद्धिक नेताको छबी बनाएका सोनामले माओवादी राजनीतिमै लागेका कारण जेल सजाय भोग्नु पर्यो। २०६० मा पार्टीको बैठकमा भाग लिन भारत जाने क्रममा उनी गिरफ्तारीमा परेका थिए। उनलाई त्यो बेला तीन वर्षसम्म भारतको बक्सर जेल चलान गरिएको थियो।
२०६३ मा जेलमुक्त भएका केसी जनमुक्ति सेनाको कमिसार बने। शान्ति प्रकृया सुरु भएपछि सेना समायोजनका क्रममा उनी वाईसिएलको ईन्चार्ज तोकिएका थिए। नेकपामा विभाजन आएपछि उनी मोहन बैद्यको समूहमा सेपिएका थिए। २०७३ मा गठन भएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछि केसीलाई माओवादी राजनीति फलिफाप साबित बन्यो।
उनी रोल्पा क्षेत्र नम्बर १(क) बाट उम्मेदवार बने र उनी निर्वाचित भए। यो बिजयले संसदीय यात्राको सुरुवात गराईदिएका केसी तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेशको माओवादी संसदीय दलको नेता चयन भए। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रदेशमा निर्माण हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएर ‘हेभिवेट यात्रा’ थालनी गरेका केसीका लागि नेकपा खारेजी उनको ब्यक्तिगत जीवनमा लाभसिद्ध भयो।
नेकपा खारेजी पश्चात सुरु भएको प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको खेलका नायक उनै केसी बने। केही महिनादेखिको यो खेलले बुधबार टुंगो पायो। यसको प्रतिफल उनै केसी सरकारको नेतृत्वकर्ता बनेर लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता हाक्ने अवसर प्राप्त गरे।
त्यसोत, नेकपा खारेजी पश्चात एमाले तिर सेपिएका आफ्ना केन्द्रका नेताको पछि लागेनन् केसी। उनी रामबहादुर थापासंग निकट थिए। नेकपा खारेजी पश्चात माओवादी/एमाले राजनीतिको खिचातानीमा तटस्थ बसेका केसी अन्ततः माओवादी केन्द्रमै सामेल भएका थिए। फलतः उनको त्यो निर्णय आफ्ना लागि बिवेकपूर्ण निर्णय साबित भईदिएको छ।
यो पनि : एअर अरेबियाद्वारा विमानस्थलमै परीक्षण सुविधा : नेपाली वायुसेवा सरकारको मुख ताक्दै
साउदी अरेबियाको वायुसेवा कम्पनी एअर अरेबियाले आफ्नै तजबिजमा नेपालको निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा विमानस्थलमै र्‍यापिड टेस्टको व्यवस्था गरेर दुबई उडान सुरु गरेको छ। संयुक्त राज्य इमिरेट्स (युएई) ले यही अगस्ट ७ देखि बोर्डिड पास लिनुअघि सबै यात्रुले विमानस्थलमा कोरोनाको र्‍यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो।
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्टिय हवाई अड्डा त्रिभुवन विमानस्थलमा यस्तो टेस्टको व्यवस्था नहुँदा सोमबार बेलुकी डेढ सय यात्रु दुबई जान रोकिएका थिए। एअर अरेबियाले निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर र्यापिड टेस्टको व्यवस्था गरेपछि बिहीबारदेखि यात्रु उडाउने तयारी गरेको छ। तर नेपालबाट युएईमा उडान भर्दै आएका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरलाइन्सले कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। एअर अरेबियाले नेपालबाट युएई अन्तर्गतको एउटा सहर सारजहाँ र राजधानी आबुधावी उडान भर्दै आएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार एअर अरेबियाले आफ्नै तजबिजमा विमानस्थलमै र्‍यापिड टेस्टको व्यवस्था गरेको हो। उक्त सेक्टरमा उड्ने अन्य विमान कम्पनीको हकमा भने कति मेसिन चाहिन्छ, कति लगानी लाग्छ, जनशक्ति लगायत विषयमा प्रक्रियागत रूपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। पिसिआर परीक्षण जस्तै जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा परिक्षण गर्दा नहुने भएकाले विमानस्थलमै कति संख्यामा मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल अघि बढेको उनले बताए।
दुबई जाने यात्रु उडाउन नसकेका दुई कम्पनीमध्ये एक नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले विमानस्थल, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग यस विषयमा छलफल भएको र चाँडै समस्याको समाधान खोजिने बताए। आजै (बुधबार) राति १०ः२० को उडानबाटै यात्रु उडाउने प्रयास भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए।
हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायत निकायले विमानस्थलमा र्‍यापिड टेस्टको सुविधा ल्याएपछि मात्रै हिमालयले सेवा सुरु गर्ने जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रैबाट जारी गरेको परीक्षण रिपोर्ट खोेजेकाले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हिमालयले उडान भर्ने १ सय ८० सिट क्षमताको विमानलाई पुग्ने गरी व्यवस्था भए मात्र उडान हुनेछ।
विमान कम्पनीले यात्रु उडाउन नपाउनु आफैंमा समस्या भएको भन्दै उनले आर्थिक समस्या भोग्दै आएको विमानलाई एकोहोरो उडानमा अझै समस्या थपिएको गुनासो गरे। उनले चाँडै समस्याको समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
एअर अरेबियाले टेस्टको व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएका नेपाली कामदार काममा फर्किने बाटो खुलेको छ।र्‍यापिड टेस्टको व्यवस्था नहुँदा गत सोमबार दुईवटा वायुसेवा कम्पनीका एक सय ५० यात्रु मध्यरातमा विमानस्थलबाट फर्किन बाध्य भएका थिए।
एअर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन दुबई सिभिल एभिएसन अथोरिटीलेले सोमबारदेखि लागू हुने गरी आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने नेपालीले ४८ घन्टाभित्र गरेको कोरोना भाइरसको पिसिआर नेगेटिभ र विमान चढ्नुअघिको चार घन्टाभित्र विमानस्थलमै गरिएको र्यापिड टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। यसको अभावमा वायुसेवा कम्पनीहरू उड्न भनेर आएका यात्रुलाई मध्यरातमा फर्काउन बाध्य भएका थिए। यात्रु उडाउन नपाएपछि सोमबार राति हिमालय एअरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज रित्तै उताका यात्रु लिन दुबई गएका थिए।
हवाई भाडा बढाए
नेपालबाट यात्रु बोक्न नपाएपछि एकतर्फी उडान भर्दै आएका वायुसेवा कम्पनीले भाडा बढाएको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। पहिले सरदर १७ देखि २० हजार रूपैयाँसम्म लिने उक्त सेक्टरमा अहिले ३५ हजार रूपैयाँसम्म भाडा लिन थालेको यात्रुको आरोप छ। पहिले नै टिकट काटिसकेको यात्रुको हकमा भने पुरानै मूल्य कायम छ।
यता सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने नेपालीले विमानस्थलमा गर्नुपर्ने र्यापिड टेस्टको व्यवस्थामा ध्यान नदिँदा उक्त गन्तव्यमा उडान भर्ने नेपाली कामदारले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। विमान कम्पनीहरूले सोमबार र मंगलबार केही यात्रुलाई होटलमा लगेर राखे पनि उडान सेवा सुनिश्चित नभएको भन्दै घर फकाइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले ४५ र हिमालय एअरलाइन्सले ५३ यात्रुलाई दुई दिनसम्म होटल राखेका छन्।
टिकट लिएर उड्न नपाएका यात्रुलाई सरकारले एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरेपछिको पहिलो उडानमा प्राथमिकता दिने भन्दै ती यात्रुलाई घर फर्काएका हुन्। हाल निगमले सातामा दुई र हिमालयले सातामा तीनवटा काठमाडौं–दुबई–काठमाडौं उडान गर्दै आएका छन्।
निगमले विमानस्थलमा कम्तीमा पनि १० वटा र्‍यापिड पिसिआर टेस्ट मेसिन आवश्यक पर्ने दाबी गरेको छ। घर बिदामा आएका कामदार बेलैमा फर्किन नपाएपछि आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले तुरुन्तै विमानस्थलमा र्यापिड परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
युएईले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै नेपालसहित भारत, पाकिस्थान, नाइजेरिया, श्रीलंका र युगान्डालाई अति जोखिम देशको सूचीमा राखेको छ। नयाँ नियम यी मुलुकबाट आउने व्यक्तिका लागि हो। कोरोना महामारीलाई देखाएर विभिन्न मुलुकले लागू गरेका नियमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई समस्या भएको छ।